Sidee laysugu daraa kabaha Dhakhtarka Martens iyo surwaal | Ragga Stylish
Naadiga 'Gentlemen' | | Calzado, fashion
ka Kabaha dhakhtarka Martens Waxay caan ku yihiin inay noqdaan mid ka mid ah kabaha ugu adkaysiga badan uguna adkaysiga badan suuqa, iyo sidoo kale inay wax ku darsadeen qaab go'aan ah oo lagu qaabeynayo muuqaalka xiddigaha fanka, dhagaxa iyo muusigga grunge. Xaqiiqdii waxaa jira qaar badan oo idinka mid ah oo doonayay inay iibsadaan labo jeer waqti dheer, laakiin ugu dambeyntiina waxaad mar walba ku dambeynaysaa inaad doorato kabo rasmi ah adigoo ka baqaya inaad garan weydo sida la isugu daro. Hagaag, qoraalkan waxaan kuu sheegaynaa sida loogu xidho labadaba surwaal toosan iyo surwaal maqaarka ah.
1 Surwaal toosan
2 Waxaan ahay surwaal caato ah
Haddii armaajadaadu ku badan tahay Surwaal toosanQaado Dhakhtarkaaga Martens oo xarigga u dhig si ay godadka kore u madax bannaan yihiin. Kani wuxuu kabaha siin doonaa ballac dheeri ah oo aan u isticmaali doonno inaan ku dhajino surwaalka guutada dhexdeeda. Xaqiiqduna waxay tahay in xeer aasaasi ah (in kasta oo aanu qof kastaa u hoggaansamin) haddana waa inaadan waligaa daboolin dusha sare ee Dukumintiyadaada, laba sababood awgood; marka hore sababtoo ah waxay ku kacayaan wax badan waana inaan hubinaa inaan sifiican u labisanay iyo tan labaad, maxaa yeelay waa wax aad u cakiran marka surwaalku ku soo dhaco bootinka.
Haddii aadan rabin inaad surwaalka oo dhan gashato bootka dhexdiisa, waxaa jira noocyo kala duwan oo ka kooban qaadashada dhammaan dharka marka laga reebo qaybta carrabka. Sidan oo kale, dhamaan wejiga hore ee bootka ayaa sii ahaan doona muuqaalka, in kastoo aan heli doonno a muuqaal rasmi ah, haddii taasi ay tahay waxa aan raadineyno.
Waxaan ahay surwaal caato ah
Kuwiina sida joogtada ah u labista surwaal caato ah, waxaad u heli doontaa wax badan oo sahlan inaad isku darto kabahaaga Dhakhtarka Martens, maaddaama fursadaha ay tarmayaan. Waxaan ku qaadan karnaa godadka sare ee xargaha oo bilaash ah (oo lagula taliyay kuwa leh 50/50 oo ah surwaal toosan iyo mid caato ah oo ku jira qolkooda) oo aan surwaalka ku dhejin karno.
Waxaan sidoo kale xiri karnaa oo aan heli karnaa muuqaal u eg qaab milatari. Xaaladdan oo kale, surwaalka waxaan ku sameyn karnaa laba shay, gudaha kaga tag ama u janjeer dhinaca habka caadiga ah, taas oo ah, surwaalka oo lagu rogo kabaha, waa ku habboon haddii aad rabto inaad ku guuleysato eeg guridda.
Sawirro - JDH / JCP / WENN.com, knotus
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Calzado » Baro sida laysugu daro kabaha dhakhtarka Martens iyo surwaalkaaga